SL55 Kabo Bad qabow - AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada SL55
SL55 waa kabaha badbaadada ee wareega oo dhan oo bixiya faa'iidooyinka maqaar nubuck waara oo lagu daray aagagga hawo leh ee loogu talagalay neefsashada sare, raaxada weyn iyo nashqad casri ah. Qaabka ayaa leh midsoles leh AirtoxNidaamka hawada ee '3.0' kaasoo bixiya heer sare oo dabacsanaan iyo raaxo leh.
Qaabka ayaa leh midsoles leh Airtox nidaamka-hawada 3.0, oo bixiya heer aan la xakameyn karin dabacsanaanta iyo raaxada. Xagga sare waxaa laga sameeyay maqaar nubuck oo la neefsanayo marka lagu daro dhar bixinta PowerBreeze® tikniyoolajiyadda. Taam ahaanshaha qaabkani wuu ka sarreeyaa maadaama injineeradayadu ay ku guuleysteen abuurista taam aad u ballaaran, ciyaaraha fudud oo kabaha ka dhigaya mid la mid ah galoofiska.
SL55 waxay ku qalabeysan tahay fududahay badhanka iyo dibedda UTURN® Nidaamka xargaha lacageed.
SL55 waa kabaha badbaadada oo dhan ee wareegaya kaas oo bixiya faa'iidooyinka maqaar nubuck waara oo lagu daro aagagga hawo leh ee loogu talagalay neefsashada sare, raaxada weyn iyo nashqad casri ah. Qaabka ...